Gawa Cooperative yoshushikana nekubhadhariswa ‘loan’ kasingaperi – Gango
Gawa Cooperative yoshushikana nekubhadhariswa ‘loan’ kasingaperi
Vanhu vemudunhu rekwa Gawa kuGokwe South kuHwenya varikushungurudzikana zvikuru nemashandiro ari kuita Inclusive Financial Institute iyo yavarikuti irikuramba ichivabhadharisa mari kasingaperi kunyangwe zvazvo iyo Inclusive yakanyora tsamba inoratidza kuti mari yekugumisira yechikwereti yakabhadharwa.
Vanhu vemudunhu rekwaGawa vakatangisa cooperative yavo vaine chinangwa chekuti vaite mabasa anovabetsera munzvimbo yavo vachibva vaita pfungwa yekubatanidza mari kuti vatenge tarakita iyo yaizovabetsera pakurima. Zvisinei mari yavo yakabva yashota vachibva vafunga kutsvaka mari yezvikwereti yavanoti loan. Mumwe wemudunhu rekwa Gawa anonzi Tinashe (handiro zita rake chairo) akataura nemupepeti weGango maringe nenyaya iyi.
“Cooperative yacho inonzi Gawa Coorperative. Yakaumbwa nevanhu vanosvika zana nemakumi matanhatu, madzimai vanokwana kuita makumi matanhatu, varume makumi mana vechidiki gumi nenhanhatu vaine chinangwa chekuda kutenga tarakita. Vakabva vashoterwa nemari inokwana kuita zviuru zvinosvika nhanhatu ndobva vanyorera tsamba yeroni kuInclusive Financial Institute iri kuBulawayo ndokubva vapiwa zviuru nhanhatu zviya. Ndokuchitanga kubhadhara mari iya sebatano revanhu vakawanda, vakabva vamboti mirei kubhadhara mushure mekunge vadaridza chimwe chikamu ndokubva vakundikana kubhadhara panguva yavakanzi vabhadhare. Vakatatarika kubhadhara mari yacho kubva mugore ra2017, vakazopedza muna Kurume wegore rino. Asi chinhu chava kutambudza vanhu ndechekuti vanhu vaibhadhara ndavanhu vekumusha pedzezvo vanhu vasina ruzivo rwakati tsikiti nenhau dzemaroni nekudaro vaingobhadhariswa mari vachingonzi haisati yakwana, vachingotumira mari kusvika mari yavo yasvika 20000 kubva ku 6000, umbowo hwuripo hunoratidza kuti mari dzaitumirwa.
“Chakunetsa ikozvino manje ndechekuti tazofoseredza kuti vanhu vabhadhare vanyorerwa rugwaro rwunoratidza kuti vakabhadhara mari yese zvakakwana panga pasisina pavanozogona kuramba vachiti bhadharai imwe hamusati mapedza. Takaita izvi tatowona kuti pese panonobhadharwa mari yacho pairamba pachiwedzerwa dzimwe mari pamusoro. Saka vakazonzi masara ne$12 000 ndobva vabhadhara ndokumanikidza kuti tipei rugwaro rwunoratidza kuti tapedza ndokubva vapihwa. Asi vapihwa rugwaro rwuya vakazoti garei garei ndokunzi zve hamuna kupedza, vakati hatina kupedza sei isu tine rugwaru rwunoratidza kuti takabhadhara mari yese zvikanzi munhu nemunhu anofanira kubhadhara US$100 inodaidzwa kuti ‘recovery’ kuti makanonka kubhadhara. Mari yacho yainzi $140 pamunhu, imwe $30 hanzi ndeyekudzimwa kuFCB uye imwe $10 iri yekubhadhara kutumirwa kwetsamba dzinodaidzwa kuti maemails dzinoenda kuFCB dzichibva kuInclusive. Nekudaro munhu wega wega ari mucoperative iyi anofanira kubvisa $140, pachinzvimbo chekuti tidzosere $6 000 yatakakwereta vanhu vakubhadhara mari inosvika $30 000.
“Mawonero edu vanenge varikuitira vachifunga kuti sevanhu vekumusha takarara uye hatina chatinoziva, saka tinowona sekuti vakuda kuramba vachimora mari kwatiri nekutibhadharisa mari dzakapamhidzirwa. Kutotsvaka mari dzacho dzirikutaurwa kunototi netsei nekuti vazhinji vedu hapana patinokwanisa kuwana mari iyoyo. Vamwe vane mari dzavo dakapinda kubva kuGMB varikutadza kubvisa mari dzacho nekuti havakwanisi kunodzitora kumabhanga kupfurikidza nekunyorwa kwavakaita kuti havana chavanoburitsa kusvika vabhadhara mari yeInclusive.
“Takazobata veReserve Bank of Zimbabwe (RBZ) tichivawonesa kuti ndodambudziko ratinaro, tikataura nevanonzi Mai Mushosho vanova Head of Financial Institute ikoko. Takataura navo muna Chivabvu ndichivaonesa vakati regai timbowongorora nhau yenyu. Kubva ipapo nanhasi hapana chati chabuda, kana tikavafonera pamwe pacho havadaviri zvimwe pada vanenge vakabatikana hatichaziviwo ipapo,” akadaro achirondedzera mupepeti weGango
Tine urombo kuti hatina kukwanisa kuwana mhinduro kubva kuna Mai Mushosho avo vekuRBZ maerano nenyaya iyi nekuti Havana kupindura kunhaurwa yedu yepa WhatsApp asi mashoko atakavatumira anoratidza kuti vakamaona asi havana kutipa mhinduro.
Gerald Ndhlovu weku Inclusive Financial Institute achitaura muneimwe nhaurirano nemumwe wechikwata cheGawa cooperative iyo yakanzwikwa nemupepeti weGango, Ndhlovu akatsanangura nexvemari yakapamhidzirwa.
“Chikwata chenyu chese 118 vanhu mese munosungirwa kubhadhara mari yekunonoka kupedza chikwereti chenyu. Nekudaro takanga tati seInclusive munhu nemunhu ngaabhadhare US$100. Asi, chikwata chenyu chakaxouya chikachema chema kuti isu seGawa tiri varimi mari yamuri kutaura yakatiwomera zvikuru, hatiikwanisi. Inclusive ichibva yati sechikwata chenyu takakukudzikisirai, sechikwata chibhadharai US$35. Mari iyi yakadzikisirwa chikwata chenyu chete. Asi kana mukauya muri mumwe mumwe munobhadhara US$100. Kurudziranai sechikwata kuti mukwanise kubhadhara mari sechikwata,” akadaro Ndhlovu munhaurirano yacho. (Mashoko aya akashandurwa kubva kuchirungu)
Mumwe wevaimbove mushandi weInclusive Institute uyo watisingakwanisi kudoma nezita akakurudzira Gawa Cooperative kuti vazame nepavanogona napo kuti vabhadhare mari irikudiwa kuitira kuti nyaya yacho ingopera.
“…Inclusive kuziva kwangu ndomaitiro avo kuita blacklist kana vanhu vachinge vanonoka kubhadhara mari dzinodiwa nekukurumidza. Vakagara vakanganisa pakuenda kuInclusive kunokwereta mari ikoko vangadai vakatsvaka kumwe. Mawonero angu vanhu ava ngavazame nepavanogona napo kuti vaunganidze mari vangobhadhara mari dzirikudiwa kuitira kuti mazita avo adzimwe kublacklist. Chandinoziva ndechekuti parizvino Gerald ndiye akabata masimba ese ekuti vanhu ava vadzimwe saka ngavangotamba irikurira,” akadaro achiudza mupepeti weGango.
Vanhu veGawa cooperative varikushushikana zvikuru kuti vangawana mari kubva kunanani kuti vakwanise kubetserekana pakubhadhara mari irikudiwa. Vamwe vavekutofunga zvekutengesa zvipfuyo.
“Chekuita tatochishayawo. Pekutangira chaipo hatinawo kuti tikwanise kubhadhara mari irikudiwa. Ndakatombofunga kutengesa huku nembudzi asi chinonetsa nechekuti huku imwechete tikaenda panzira apo tinotengesa nemari yakaderera zvekuti kuwana mari irikudikanwa kunoda kutotengesa mbudzi mbiri chaidzo,” akadaro umwe wemubatanidzwa we Gawa asi akakumbira kusadomwa nezita.
Gawa cooperative varikutarisirawo kuwana angavabatsira kupedza dambudziko ravo nekudaro kana kune vanoshuvira kubatsira ngavabate Chairperson wavo anova Mai Marega pa+263718181200.